Tag: inbound marketing worksheet | Martech Zone
Tag: inbound marketing worksheet
Pepa Rokushandira: Inbound Kushambadzira Yakaitwa Nyore
Mugovera, Mbudzi 9, 2013 Svondo, November 17, 2013 Lorraine Bhora
Inguva apo iwe paunofunga iwe uine mubato pane ino internet kushambadzira zvinhu, nyowani buzz nzvimbo. Parizvino, Inbound Marketing iri kuita kutenderera. Wese munhu arikutaura nezvazvo, asi chii icho, unotanga sei, uye maturusi api aunoda? Kushambadzira kuri mukati kunotanga neruzivo rwemahara, rwunopihwa kuburikidza nemagariro nzira, kutsvaga, kana kushambadzira kwakabhadharwa. Chinangwa ndechekumutsa kuda kuziva kwetarisiro uye kuita kuti vatengese yavo